यौन र जीवन – Page 8 – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
सिंहदरवारवाट निस्किएको मोटर वालुवाटारमा दुई घण्टा सम्म अवरोधमा
धादिङ,- सिंहदरवार र वालुवाटार भन्ना साथ नेपालको राजनितिमा नङ र मासुको सम्वन्ध हुने गर्छ । सिंहदरवारमा पुगेपछि मात्रै वालुवाटारमा जानका लागि धेरैको बाटो खुल्ने हुने गर्छ । नेपालको राजनितिमा यो दुई ठाउंको नाम लिनासाथ राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रले समेत निकै चासो राख्ने गर्दछन । तर कहिलेकाँही सिंहदरवार र वालुवाटार एउटै रथको..
कतिखेर दिसा आउँछ ? अब मोबाइलले बताइदिनेछ
आफुलाई कतिखेर दिसा लाग्छ वा कतिखेर मलमुत्र त्याग गर्न जानुपर्ने हो भन्ने कुरा समेत अब मोबाइल फोनको जिम्मामा छाडिदिने जमाना आएको छ । वैज्ञानिकहरुले यस्तो उपकरण बनाउँदैछन् जसले मानिसलाई कतिखेर दिसा गर्न जाने भन्ने कुरा बताइदिनेछ । डी फ्री नाम दिइएको उक्त डिभाइस खासगरी अपांग तथा विभिन्न खाले असक्तता र रोग भएका मानिसहरुका लागि..
“रत्नपार्कमा कुन तीन किसिमका यौनकर्मी छन्?थाहा पाई राखौ
कार्यालय वा छिमेकीका विवाहित महिलाहरू पनि पेसेवर यौनकर्मी हुन सक्छन्। कम पढेलेखेका विवाहित महिलाहरूको आर्थिक अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आएको छ र उनको बाहिर देखिने गरी कुनै पेसा व्यवसाय छैन भने उनी पेसेवर यौनकर्मी हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यौनकर्मीहरूमध्ये ८८ प्रतिशतले मदिरालगायतका मादक पदार्थ सेवन गर्ने भए पनि उनीहरू आफ्नो..
जन्मदै अस्पतालबाट हराएकी किशोरी सत्र वर्ष पछि फेला पार्न सफल
संसार गोलो छ । आज छुट्टिएको परिवार भोलि फेरी एक नहोला भन्न सकिदैन । त्यस्तै कुनै परिवार बाट एक बालक हराएको छ भने जिन्दगीको कुनै पनि क्षणमा आफ्नो परिवार सँग उसको मिलन हुन्दैन भन्न पनि सकिदैन । हो, यस्तै भएको छ दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी केप टाउनमा । त्यहाँ सत्र वर्ष पछि एक किशोरीको आफ्नो परिवार सँग मिलन भएको छ । कथा यस प्रकार छ :- सन् १९९७ अप्रिल..
महिलाको स्तनमा आकर्षण
बाटोमा हिँड्दा तपाईं महिलाको कुन अङ्ग हेर्नुहुन्छ ? ‘खै पर्टिकुलर, त्यस्तो हेर्ने गरिएको त छैन, तर पुरुषहरूको ध्यान सबैभन्दा पहिले स्तनमै जान्छ जस्तो लाग्छ, मेरो पनि त्यही नै हो,’ गायक निमा रुम्बाले साप्ताहिकको केवल एक प्रश्नका लागि सोधिएको प्रश्नमा दिएको उत्तर हो यो। युवतीलाई झट्ट हेर्दा स्तनमा आँखा जाने निमा एक मात्र पात्र होइनन्, एक..
लौ हेर्नोस, पुराण सुन्ने ९३ किलोको खसी
मोरङको सिसवनी–१ का विनोदकुमार महतोेले ५ वर्ष अघिदेखि पालेको एउटै खसीको तौल ९३ किलो छ । अनौठो ब्यबहार देखाएपछि महतोले सो खसी विक्रि नगरी पाल्दै आएका छन् । राँगोजत्रै खसीको ब्यबहारले जो कोहीलाई आश्चर्य चकित बनाउने गरेको छ । खसीको ब्यबहारबाट प्रभावित भएर स्थानीय तथा बटुवाले समेत खानेकुरा दिने र पूजा गर्ने गरेका छन् । बडेमानको खसीको..
भैँसीले चोर मार्‍यो
आगरा–भारतको आगरा स्थित नगलमणि गाउँमा एक चोरलाई भैँसी चोरी महँगो सावित भएको छ। भैँसी चोर्न गएको चोरलाई भैँसीले खुब धुलाइ गर्योा। अन्ततः भैँसीले हानेको गम्भीर चोटका कारण चोरको मृत्यु भयो। राति चोरले भैँसी चोरेर भागिरहेका थिए। जब खुला मैदान आइपुग्यो भैँसीले उग्ररुप लियो। आत्तिकएको बेला चोरको हात भैँसीको गलामा लाएको डोरीमा..
​सुन्दर देखिन जसले ४० वर्षसम्म नहाँसी बिताइन्
अनुहार चाउरी पर्ला भनेर एक महिलाले ४० बर्षसम्म नहाँसिकन बिताएकी छिन् । ५० बर्षकी टेस क्रिश्टियन नामकी महिलाले ४० बर्षसम्म नहाँसी बिताएकी हुन् । आफुले सधै किशोरी देखिन यस्तो गरेको उनले खुलाशा गरेकी हुन् । स्थानीय एक रेष्टुरेन्टमा भएको गेट टुगेदरमा टेस नहाँसेपछि उनका साथीहरुले यो रहस्य थाहा पाएका हुन् । आफ्ना साथीहरु एकअर्काका..
सुहागरातमा बेहुलीको कपडा खोल्न नसकेपछि डिभोर्स
सुहागरात भन्ने बित्तिकै हरेक विवाहित जोडीको पहिलो रात भन्ने कुरा सबैको बुझाईमा परिहाल्छ । जिवनभर संगै रहने प्रतिवद्धता संगै एक भएको दुई मनका बिच सुहागरातमा एकले अर्काको मनको भावना बुझ्ने मात्रै होइन । दुई मन एक अर्कामा समर्पण पनि हुने गर्दछ योपनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सुहागरातले बांकी जिवनलाई कस्तो वनाउने भन्ने योजना पनि वनाउने..
एउटा मोटरसाइकलको मूल्य २ करोड ७७ लाख
काठमाडौं,-स्वीजरल्याण्डको एक मोटरबाइक उप्पादक कम्पनी ‘फेलोइन मोटरसाइकल्स’ले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो मोटरसाइकल निर्माण गरेको छ । जसको मूल्य २ लाख ८० हजार डलर अर्थात दुई करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ‘फेलाइन वान’ नामको मोटरसाइकल बनाउन चार वर्ष लागेको सो कम्पनीले जनाएको छ । उक्त मोटरसाइकलमा कार्बन, टाइटेनियम, आल्मुनियम तथा अन्य..
काठमाडौं-भ्यालेन्टाइन अंकमा साप्ताहिकले नेपालकै १० सर्वाधिक आकर्षक सुन्दरीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार प्रकाशित अंकमा सार्वजनिक गरिएको सूचीमा गायिका इन्दिरा जोशी पहिलो स्थान कब्जा गरेकी छिन । यसैगरी अकेशा विष्ट दोस्रो नम्बरमा परेकी छन भने प्रियंका कार्कीले तेस्रो स्थान कब्जा गरेकी छन । साप्ताहिकले १० जना सर्वाधिक आकर्षक..
रसियामा तीनवटा सुर्य उदाएपछि …
काठमाडौं: हालै रसियाको एक गाउँमा एकैपटक तीनवटा सुर्य उदाएको दृष्य देखियो । काजाकिस्तानको सिमानादेखि ८० माइल टाढाको एक गाउँमा एक्कासी तीनवटा सुर्य उदाएको देखेर चेलियाविंस्कका स्थानीयबासी चकित परेका थिए । स्थानीयले लहरै तीनवटा सुर्यको किरण देखेपछि चकित भएका थिए । तर यथार्थमा त्यहाँ तीनवटा सुर्य भने उदाएका थिएनन् । हावामा आँखाले..
यसरी आकर्षित हुन्छन् पुरुषसँग महिला
कतिपय पुरुषहरुलाई लाग्छ महिलाहरुलाई आकर्षित गर्न कठिन छ तर महिलाका विषयमा स–साना कुराहरू विचार गर्न सके उनीहरूलाई सहजै आकर्षित गर्न सकिन्छ । महिलालाई आकर्षित गर्न यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । –सकेसम्म आफ्नो जन्मदिन, वार्षिकी जस्ता समयका अगाडि नै केही तयारी गर्ने राख्ने गरे उनीहरू खुसी हन्छन् । यसले पुरूषले आफूलाई ख्याल गरेको..
बेहुलाको घरमा बेहुली धर्नामा बसिन्
फोटो :बिबिसी भारतको बिहार राज्यस्थित एक गाउँमा युवकलार्इ अपहरण गरेर बिहे गराउने परम्पराले एउटा अनौठो घटना विकसित भएको छ। बिहारको बेगुसराय जिल्लाको मकदमपुर गाउँकी एक युवती माइती घरबाट जन्तीसहित उनको घरमा पुगेर धर्नामा बसिन् । मंगलबार साँझ गाउँका एक मुखियाले जुस खुवाएर उनको अनसन तोडाउनुपर्‍यो । बेहुलाको घरमा गएर धर्ना बसेकी..